Kukwira mukadzi wemuWatchTower - Vanoda Zvinhu
Iyo nyaya yekuti vakadzi vakaita nhumbu vanotanga kuda kusunga zvinhu, inotivhura meso mune zvimwe. Munoziva vabereki, kubva mukadzi wangu paakangoita nhumbu yekutanga, mumba medu makatanga kusaSpaka. Ndaiiti pese pandaida kumbofila chikapa, munhu aibva atanga kundiudza zvatsuro nagudo, zvekuti magariro atanga takuita takange takuita kunge varume vanogara vese! Nyaya idzi ndaimbodzitaura kune mufesi wangu wekugraft, achimboedza kundipa mazano asi hapana chaibuda.
Ndakange ndavane 2 months, ndiripamutsanyo zvekuti ndakange ndakutofunga zvekuno simudza mahure pamaShops edu epaMereki kuWarren park D. sezvo nhumbu yakange iri yekutanga, mukadzi ndakamupa mari yebhazi yekuti amboenda kuna amai vake kuBuhera, achimbonodzidziswa zvekuita kusvikira abereka. Ndakafara zvikuru achibvuma Idea yandakange ndamuudza, ndokumuperekedza kuMbare kumabhazi. Yakange iri Sunday masikati pavakakwira vachienda, zvekuti ndichiona bhazi richisimuka ndakabva ndati,’ zvangu zvaita, kusvikira pavanodzoka ndinenge ndapfidza naro beche. Ndakakwira kombi yekumaraini, ndikaburukira pamashops epaMereki ndikatenga 3 Quarts dzeCastle dzekumisa mboro. Ndakananga paDen, ndikaona pasina kana munhu zvake panze. Ndakange ndambonzwa kuti Landlord vakange vaenda kuchechi Saturday nezuro acho, koti vamwewo maroja hameno kuti vakange vafamba sei. 1 room yangu yanga iri kuseri ,zvekuti kupinza hure kwaitoda time time. Ndakasvikonoisa 2 maQuarts muDip Freezer, rimwe racho bvandavhura ndokutanga kunwa. Apa kuti zvinhu zvindiitire bhoo, ndakaisa Disc rePorno kuti ndinyatsopinda muGear! Nekuti wakaona masvirirwo anoitwa vakadzi vemumaPorno, nemazimboro anenge achibuda wega unoti yaa dai ndaidaro ndaipedzera vakadzi. Ndakati ndamuQuart rechi2, ndakatanga kunzwa kuda kusvira zvekuti mboro ndanga ndakuita yekudzvanya neruoko kuti isabude muTrek Bottom randakange ndakapfeka ndatyora paDen. Sezvamunoziva varume, Larger rinoti wakamwira mwira, unotomboda kuita weti! Saka ndakangoti sezvo ndisina kuona munhu, rega ndibude ndisina Shirt
. Apa mboro yanga yasimudza bottom zvekuti ndaitoona choya changu. Mukuvarairwa kudaro, dhuma dhuma nemukadzi anogara kuFront kwemba. Mukadzi uyu akange aine, atinoti mazimhata, zvekuti paaifamba mazitako anenge achitamba tamba. Akange arimukadzi wemuroja aiita zveWatch Tower, aipenga nechechi zvekuti mazuva andaipfuura ndichienda kubasa, mukadzi iyeye aripa Duty ndaiona kuti kumwe kumudhura kwacho kwakanga kuri kwekushaya mboro. Nekupfuura kwandakaita, ndichipinda mugedhi pandaibva kupusha madam,inofanira kunge yanga iriyega nokuti pese pandaipfuura ndaiona vakagara paVerandor. Apa ziso rataingokandirana kubva pandakatanga kuroja ipapo raitaura zvakawanda, asi munongoziva anotanga mumwe hapana.
Ndakaona kuti ndidzokere kumashure nepandakange ndave hazvaigona, ukuwo Door reToilet ndakange ndatarisana naro,uyezve kumwewo mai iyi yakanga iripa Sink ichiwacha tumaDish towel, yakange yatomhanyisa maziso ayo pahasha peTrek Bottom. Pakanyararwa kwekanguva zvekuti, aitanga mumwe neyaitambika ndopaishaya. Ivo vakange vayeva zimboro rangu, ini ndichitarisa kubva kumeso kwavo, ndichidzika kusvika kune mazimhata embiri aya. Ndakazonzwa nekazwi kanyoro nyoro, kuti, “Maswera sei? Apa ziso ravo harina kubva paBottom rangu. Ndakadaira ndichibva ndapinda muToilet zvekuti ndakasvikotura befu ndave mukati, because it was a very seductive and intense moment!
Ivo kunditarisa kwavakaita, vakatoiwedzera mukumira uye nemuvhuriro wakaitwa maziso, pfungwa dzavo dzakange dzamhanyira kuda kuoona zvirimukati. Ndakabuda muToilet, ndokunanga mumba mangu ndisina kucheuka kwavari. Asi pfungwa dzangu dzanga dzavhiringidzika, especially nemhata dzandakange ndaona muzambia rakange rakamonererwa, apa ndakasvikotarisana nePorno yaiPlayer paTv, mboro yangu yakazonyatsokoka zvekuti tsinga dzakange dzakurwadza and l could not help it.
Ndakaita pfungwa dzekuti chero zvazvaita, ndofa ndayedza coz penetration yacho yanga yakutoda beche ipapo. ndakabuda panze zvakare ndokunotarisa amai vaye zvakare, apa ivo vakatoona kuti face yangu zvayakange yaita, ndaiita kunge munhu ari Possesed. Ndakavashevedza kuti ndirikukumbirawo kumbovaona, and to my Surprise havana kuramba. Vachinyaririra, vakaswedera pedyo ini ndokuva Director mumba, ndichiti zvinhu zvacho zvaida tirimumba.
Zvishoma shoma vakapinda, ini ndokuvhara Door mumashure mavo. Yakada kuita kakuvhunduka, payakanzwa ndavhara Door, uyezve yakasvika ichisangana nePorno yandaiPlayer paTv. Ndakaona munhu oita kunge apera simba achiona izvi. Achicheuka ini ndakange ndasvuura kudhara , apa mboro yakange yaita Banana kumira kuti twii! Sokuda kunge kunyara, yakada kupfuura nepandiri ichiita kunge irikuda kunovhura Door, asi yakasvika kunowira mumaoko angu. Ndakanzwa munhu ofemera pamusoro kuratidza kuti She felt the Erotic moment zvekuti anga atotesa.
Ndisingade kutambisa nguva, ndakasunungura Zambia riya, wanike aaah munhu anga asina bhrugwa. Ndakadzvanya dzvanya mhata dzese, ndichikisa muhuro. Ndakanzwa mai yoita tuma mourning Sounds twekunakirwa nezvandaivaita zvekuti she submitted kwandiri. Takadonhera pamubhedha ndakabvisa T-shirt yavakange vakapfeka, zvekuti Body heat ndakange ndakuinzwa miri dzedu dzanamana. Ndakaita yekuti pfeee zvinyoro nyoro, ndichinzwa mukadzi achichemerera with every inch yandainyudza. Kana iri havi yekushaya mboro, yaiita kuti vakwindimare ndaida kuipedzera. Ndakaona vachisekerera vakatsinzinyira vachiterera mugwara waifukunura mukati mavo. Apa beche racho rakange riri tight, zvekuti dai ndakaita hwetsuro, ndaikasika kutunda.
Ndakazotanga kurova maStyle emuPorno aye anoti: Side position,Bench style, Rodeo style,Frog style, nekuvharisa ne my Favourate inonzi Doggy style. Mukusvira kwese kwandakaita mukadzi uyu, ndaiona Ginger raakange ainaro akange asati ambozviitwa nemurume wake. Tichirara pamubhedha takudikitira, ndakanzwa chidya chake chaiswa pamusoro pemakumbo angu bvaati. “Maita basa Daddy”. Ikozvino sekutaura so ndichiriko kuWarren park D, ende for makore 4 andagara up to date, handichina nhamo yebeche. Chokwadi mukadzi wemunhu anonaka.
Tags: kukwira mukwadzi wemuwatch towerkusvira mukadzi wemunhukusviranamukadzi wemunhu
Mukadzi akaroorwa especially akaita vana ndiye asinaganetse kusvira manje. Pane mhoms yandasvira nhasi apa ndaingoiona every time iri…
I had just got home from work ndakaneta ne stress dzekugraft.ndakafunga kunogezera mushower.Ndiripakati pekufunga nhamo dzekugraft hangu ndirimo…
Mukadzi akaroorwa especially akaita vana ndiye asinaganetse kusvira manje. Pane
I had just got home from work ndakaneta ne stress